အမျိုးသမီးများတွင် အဖြစ်များသည့် မျိုးဆက်ပွားစနစ်နဲ့ပတ်သက်သော ရောဂါများအကြောင်း (Common Reproductive Health Concerns for Women) Endometriosis ဒီရောဂါကတော့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ သားအိမ်မှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့သားအိမ်ကို ဖုံးပေးတဲ့ တစ်ရှူးအလွှာတစ်မျိုးဟာ သားအိမ်မှာရှိရမယ့်အစား တစ်ခြားတစ်နေရာ ဥပမာ - ဥအိမ်၊ သားအိမ်အနောက်ပိုင်း၊ အူသိမ်အူမ၊ ဆီးအိမ် (သို့) အရမ်းရှားပါးတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာတော့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အခြားတစ်နေရာရာ ပေါ်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်
ယနေ့ခေတ်မှာ ဒီပလိုမာသင်တန်းများမှအစ ဘွဲ့ရသည်အထိ သင်ခန်းစာများကို အချိန်ကုန်လူပင်ပန်းစရာမလိုဘဲ အွန်လိုင်းမှာ လေ့လာလို့ရနေပါပြီ။ သင်ဟာ အွန်လိုင်းမှာ မိမိစိတ်ဝင်စားတဲ့ နယ်ပယ်(သို့) မိမိအလုပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခုခုကို ထိထိရောက်ရောက် လေ့လာသင်ယူချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်အချက်တွေကိုစပြီးလုပ်ဆောင်သင့်တယ်ဆိုတာကို အကြံပြုပေးချင်ပါတယ်။ (၁) စာသင်ခန်းထဲမှာ သင်ကြားနေရသကဲ့သို့ အွန်လိုင်းမှာ မိမိတက်ရောက်လိုတဲ့ ဘာသာရပ်ကို အလေးထားသင်ယူပါ။ အွန်လိုင်းသင်တန်းတွေတက်ပြီဆိုရင် မိမိကိုယ်ကို စည်းကမ်းလေးတ
မင်္ဂလာပါရှင် ကျွန်မတို့ Youth Society for Education အနေနဲ့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ လူမှုရေးကဏ္ဍတွေမှာ လိုအပ်တဲ့လှူဒါန်းမှုတွေကို စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်‌ခဲ့တာကို အားလုံးလည်း သိကြပါလိမ့်တယ်။ ယခု ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာဆိုရင် period poverty ကိုတိုက်ဖျက်နိုင်ဖို့အတွက် NGO အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ Non-Profit Organizations တွေ အားလုံး ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့ Youth Society for Education အနေနဲ့လည်း period poverty ကိုတိုက်ဖျက်တဲ့နေရာမှာ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ပါဝင်သွားချင်တဲ့အတွက် လစဉ်ပြု
DID YOU KNOW?? Apple, ServiceNow, and PG&E match or double the employee’s donation to any eligible nonprofit organization that includes YSE! And when you shop on Amazon Smile, Amazon would donate 0.5% of your purchase to the nonprofit organization that you are supporting! So, please kindly find us, Youth Society for Education, when you shop on Amazon Smile or makeadonation on your company's gift matching platform. 😊 🙏 A big THANK YOU to donors who supported YSE through
Mental Health Effects Since the Start of COVID-19 အာလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ယနေ့ YSE ကနေ မိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် (ကိုဗစ်-၁၉) ရောဂါကြောင့် ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (ကိုဗစ်-၁၉) ရောဂါစဖြစ်သည့်အချိန်မှစ၍ လူပေါင်းများစွာရဲ့ဘဝတွေ အသက်တွေဟာ ဒီရောဂါကြီးကြောင့် များစွာ ပြောင်းလဲခဲ့ရပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (ကိုဗစ်-၁၉) ရောဂါဟာ လူတွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကို ပြောင်းလဲရုံသာမက ငွေကြေးအခက်အခဲ